Simba rekupa, Power Adapter, Power Adapter - Huyssen
Yakatetepa SMPS 5V
AC/DC 110V 4.5A 500W kushandura magetsi
DC Programmable simba rekupa 0-5000V 1A 5000W 5...
IP67 LED Driver 5V 80A 400W Mvura Isingapindi Simba Su...
DC 52V 3A 150W Kuchinja Simba Kugovera nePFC ...
Inogadziriswa 0-20V 30A 600W Kushandura magetsi
Inogadziriswa 0-200V 3A 600W Kushandura magetsi
AC/DC 0-24V 20A 480W inogadziriswa chinja simba...
Inogadziriswa 0-220V 2A 440W Kushandura magetsi
Inogadziriswa 0-12V 33A 400W CV CC Kuchinja simba...
0/1-10v dimmable mutyairi 32~40V 120W Waterproof ...
Rack Mount 0-60V 200A 12KW Adjustable Programmi...
2 mafekitori 6 mahofisi
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadziridzwa kuti zvienderane nepasi rose kuchengetedza mwero.
Tarisa paR&D uye kugadzira muindasitiri yekugovera magetsi kwemakore gumi nemashanu.
Yakavambwa muna 2011, Huyssen simba rakazvipira kuve mupi ari nani wemhinduro dzemagetsi. Mitsetse yedu yekugadzira inosanganisira AC-DC magetsi emagetsi, High-power DC magetsi, Power adapter, Quick charger, yakazara 1000+ modhi.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadziridzwa kuti zvienderane nepasi rose kuchengetedza mwero. Hunhu uye maitiro ekutonga anopihwa inishuwarenzi uchishandisa akasiyana ehuwandu sampling uye yekuongorora matekiniki panguva yese yekugadzira. Pamusoro pezvo, zvigadzirwa zvese zvinofanirwa kupfuudza kutsva-mukati uye zvizere otomatiki yekupedzisira bvunzo isati yatumirwa.Tine mabhesi maviri ekugadzira, imwe muShenzhen uye imwe muDongguan, nekutumira panguva.
1. Tine mitsara yakakwana yezvigadzirwa zvemagetsi, kubva pa5 watts yeadapta yemagetsi kusvika ku100,000 watts yeprogrammable power supply.
2. Complete specifications, yakasimba R & D timu, tsigira inokosha customization. Isu tinokupa iwe zvinokwanisika kugadzirisa magetsi.
3. Kukurumidza kupindura kune vatengi, kuratidza munguva, kukurumidza kuendesa.
Huyssen simba mutengesi wepasi rose weHigh Voltage Programmable DC Power Supplies. Tine akatevedzana eDC programmable magetsi ekushandisa ayo anonyanya kukodzera mukunyatso uye nekuenderera mberi ...
Kuti ugadzirise kumanikidzwa kwebasa, gadzira chido, mutoro, uye mufaro wekushanda, pfumisa vashandi 'amateur tsika yehupenyu, kuvandudza hutano hwekambani, uye kuwedzera kutaurirana ...
Huyssen Power's ekupedzisira-mutete magetsi ekushandisa
Huyssen Power's ekupedzisira-mutete-mutete-simba emagetsi emagetsi aburitsa mutsva we800W. Iyo LED yekupedzisira-yakatetepa isingapindi mvura magetsi, nekuti zita rinoratidza, yakanyanya kutetepa uye yakatetepa, inogona ku ...
Huyssen's isina mvura magetsi emagetsi ane yakakwira PFC
Huyssen's PFC isina mvura magetsi emagetsi anosanganisirwa simba kubva pa150 Watt kusvika pa600W. Mhepo inobuda inogona kuva 5V, 12V, 24V, 30V, 36V, 48V, nezvimwewo. Yakarongedzerwa mune yakasimba, isingapinde mvura, isina guruva, die cast al...
Customized Power Supply, Programmable Power Supply, Dc Power Supply, Variable Power Supply, switch mode simba rekupa, Led Strip Light Power Supply,